Ubugagu - omunye oluyimfihlakalo kunalo lonke. Futhi omunye umxhwele kakhulu, futhi. Ngempela, ngobugagu - a, ibutho elikhulu esingenakuphikiswa. Akukona sobala ukuthi ncamashi abanesiphiwo we izimbongi enkulu, kodwa zonke izinto ababezizwile ngokwaziswa asanda kukuzwa. Futhi phatha, kuholele isixuku, ngekhono usebenzisa bokukhuluma kwakhe.
Umlando uyakhumbula izimo lapho yimpumelelo wasiza ukugumbuqela umbuso. A esashiwo kahle esenzweni uyakwazi ukuvusa isixuku niwayise kulokhu kuvukela. Futhi njengoba nje imithelela Izinkulumo wenza izimbongi enkulu yomlando kuze kube phakade ezigcinwe zomlando, lapho alotshwe amagama labo yema ngemva kwabo. Ake sihlole kubo.
amagagu Omkhulu zomhlaba: ohlwini
Ngezansi kukhona uhlu lwamagama alabo abangathanda kunazo ubugagu abathintekayo befikile kwakhe amakhono nasekuzithuthukiseni thina ngokwethu, washiya uphawu umlando. Njengoba ungacabanga, lokhu akukhona zonke izikhulumi elikhulu: zonke kulesi sihloko iDemo nje ayilingani. Kodwa kubalulekile kumuntu, okuyilona elidingekayo ukuze ukwazi okungaphezu nje amagama.
IGrisi yasendulo wayengekho ncishana ngethalente. Izwe uyakhumbula abaculi bayo. Demosthenes wayedume bokukhuluma kwakhe, eziningi izimbongi enkulu endala wathatha isibonelo wayenaye. Yayiyini indlela indoda genius? NgesiGreki kusukela ebuntwaneni wayazi ukuthi ufunani, futhi kusukela zisencane wayazi ukuthi ziningi kangakanani izinto kuyodingeka ukunqoba ngenxa ke: ngoba umfana wahlushwa kubophane ulimi, nezwi lakhe ababuthakathaka, futhi ukuphefumula - imfushane kakhulu. ukuqeqeshwa Harsh ukuxazulula lezi zinkinga: master esizayo yokukhuluma zezombusazwe athayiphwe amatshe umlomo futhi wathatha isici sakhe umsizi - rant waya ogwini futhi ukugibela izintaba eziphakemeyo eziphansi. Indlela yokuqala manje Kunconywa sokuthuthukiswa kuhambisana kubhekwa ephumelela kakhulu - necala eqinile neziqinisekiso eziningi. Njengoba singabona, Demosthenes hhayi ngowokuqala nje ukusho lapho isiqalo ukhuluma ngani labo ababizwa ngokuthi "the amagagu kunabo bonke."
Kuvele eyiqaphuqaphu oluvelele lasendulo, ogama amakhono ifinyelele eziphakeme yokuthi igama lakhe usuphenduke into efanayo kulesi hlobo lo msebenzi. Ngeshwa, engaphezu kwekhulu izinkulumo ezahlukene zokwahlulela nezombusazwe Cicero kuze kube manje wahlala ngokuphelele amahlanu nesishiyagalombili kuphela. Ukuze yokufaneleka kwalo naye ungowasendaweni ukuthuthukiswa theory bokukhuluma.
ISidlo mkhuba ezilandelayo: eziningi izimbongi enkulu kuphumelele ngokwenza bebodwa. Baphendulé ubuciko imbangela ukuphila kwakhe, akazange abuqede ukuthuthukiswa nokuqhubeka ngcono. Kungokufanayo-Abraham Lincoln, uMongameli nesithupha United States of America, isikhundla sabo sezimali okwamenza wakwazi ukuchitha ngonyaka ebhentshini esikoleni. Noma kunjalo, wathatha umfana ngoba imfundo yakhe futhi wagcina esengumphostoli esinye isikhulumi evelele kunazo zonke abakhumbula emhlabeni.
amagagu Omkhulu ekhulwini lama-20 ayikwazi okukhulunywa ngaphandle igama uWinston Churchill, ogama sokunconywa kwakwanele nokuhileleka kwezombusazwe, kanye etemibhalo (zokugcina, yena yanikezelwa uMklomelo KaNobel). Indlela kukaNdunankulu Enkulu YaseBrithani ku ubugagu kancane like endleleni eya buciko nodumo Demosthenes osekukhulunywe ngazo zisikhuthaza: it like nje umlingani wakhe ngesiGreki, Churchill Inkulumo ukukhubazeka kodwa ukuthatha yena kanye ngimbiza amandla ngokuphawulekayo intando, I wakwazi ukunqoba lesi sithiyo, futhi lokhu kuye wathola indawo kulolu hlu.
UMongameli amabili nesishiyagalombili ka-United States, Vudro Vilson, waba bagogoda inhloko yezwe. Yena wayeyingcweti ulimi lwesiNgisi kanye zobudokotela. Omunye evelele kunazo zonke izinkulumo zaso - "Amaphuzu Nane" - umongameli iziphakamiso eziqukethwe nempi futhi waba okusalungiswa ukuthula isivumelwano, okuyinto ucedzela kwempi yezwe yokuqala.
indoda ebalulekile emlandweni kwekhulu lamashumi amabili, kuthinte ke akukho isuka esiqalweni esiphansi, ngokuvamile ukukhunjulwa njengombulali zikamashiqela enkulu. Kodwa kunzima ukuphikisa yokuthi u-Adolf Hitler waba banamakhono amaningi, kungenjalo wayengeke Usufike phezulu. Bokukhuluma, ikhono lokukhuluma kahle futhi ngendlela ekholisayo, njengoba kwaba sobuntu bakhe ngokugcwele. Hitler ebizwa ngokuthi wazonda kakhulu futhi ngesikhathi esifanayo lo muntu othandekayo kakhulu kulelo khulu leminyaka lama-20. Ikhono kwalesi sibalo izinkulumo aqaphele ngisho ardent kwabaphikisi bakhe.
Eyesibili futhi uMongameli wesine Russia ngakwesokudla kuyinto uhlu izimbongi enkulu. Ngakho, cabanga ngendaba zeningi , uVladimir Putin - iminyaka engaphezu kuka-nanhlanu. mpendulo yakhe inezici eziningana: ubugagu ngokuvamile ugcizelela ukukhanya futhi kushaqisa, kodwa inkulumo we owayengumongameli waseRussia uye kuhlaziywe njalo, ezakhayo, ezolile nenengqondo. Futhi kunemtselela: phela uVladimir Putin umdlali enkulu emhlabeni kwezepolitiki.
Isikhulumi besikhathi sethu, kwakhe namakhono bazohlolwa ngokusebenzisa isizukulwane esilandelayo amavidiyo we-YouTube - kubonisa indlela umoya amabili nanye, digital, leminyaka. Ukubona ne ijubane lapho lo muntu kugqugquzelwa inkampani Apple imikhiqizo yayo, kunzima sokungabaza efeni lakhe ubugagu. Ngokungafani sibonile ezibonelweni ezingenhla, Stiv Dzhobs Nokho, wathumela ngobugagu lakhe emkhakheni wezepolitiki yomsebenzi, kodwa izinto zokumaketha. Lokhu kwaletha imivuzo esasiwafanele. inkulumo Magnetic, onekhono futhi ongasoze uMnu Steve Imisebenzi okufanelekelayo liphathwe kulolu hlu.
Isitshalo ezisebenzisekayo amahle for ekhaya lakho - sansevieriya. Uyabakhathalela ekhaya
Emblem Ukraine. Uyini elingenamikhono izingalo Ukraine? Umlando Ukraine lesiTjhaba
I-chlorine: Ukufaniswa kwezakhiwo zamakhemikhali nezomzimba